lulu: ကြက် အရေပြား အရိုးသုပ်
ကြက် အရေပြား အရိုးသုပ်
at 12:11 AM Labels: အသုပ်
ကြက်အရေပြားသုပ်နည်းမေးထားတဲ့ မဇာအတွက် ဘယ်လိုလုပ်ရတယ်ဆိုတာကို ပြောပြပါရစေနော်။ ကြက်အရေးပြားတင်မဟုတ်ပါဘူး၊ ကြက်ရိုး၊ ကြက်ခြေထောက်၊ ကြက်ခေါင်း၊ ကြက်တောင်ပံ၊ ကြက်သည်းကြက်မြစ်နဲ့ ကြက်အူတွေကိုပါ သုပ်လို့ရပါတယ်နော်။
ကြက်အရေပြားသုပ်ဖို့အတွက် လိုအပ်တဲ့ပစ္စည်းအတွက် ကြက်အရေပြား၊ အရိုး၊ ကြက်သည်းကြက်မြစ်၊ ကြက်အူ၊ ကုလားပဲ၊ ကြက်သွန်နီ၊ ကြက်သွန်ဖြူ၊ ချင်း၊ ဂေါ်ဖီထုပ်၊ ရှောက်ရွက်၊ ငရုတ်သီးစိမ်း၊ ငရုတ်သီးမှုန့်၊ မာဆလာ၊ ရှောက်သီး၊ ဆား၊ နနွင်းမှုန့်၊ အချိုမှုန့််အနည်းငယ် နဲ့ ဆီတို့ပါနော်။ ကုလားပဲကိုတော့ ညကတည်းက ရေစိမ်ပေးထားပါနော်။
ကြက်အရေပြား၊ အရိုး၊ အသည်းအမြစ်၊ အူတို့ကို သန့်ရှင်းအောင်ရေဆေးပေးပါ။ အရေပြားနဲ့ အတောင်ပံမှာ ရှိနေတတ်တဲ့ အမွှေးအမျှင်တွေကို သေချာသန့်ရှင်းရေးလုပ်ပေးပါ။ ခြေထောက်ကို သန့်ရှင်းရေးလုပ်တဲ့အခါ အရေခွံခွါရလွယ်အောင် မီးလေးနဲ့မြှိုက်ပေးပြီးမှ အရေခွံကိုခွာပေးပါ။ ပြီးတော့ ခြေသည်းတွေကိုလည်း ခုပ်ထစ်ပစ်ပါ။ ပြီးတော့မှ အရိုးအသည်းအမြစ်အူတို့ကို ချင်းအရည်၊ ဆား၊ သကြား၊နနွင်း၊ မာဆလာ၊ အချိုမှုန့်တို့နဲ့ နယ်ပြီး နှပ်ထားပေးပါ။ ကြက်သွန်ဖြူနဲ့ ကြက်သွန်နီကို အခွံနွှာ၊ ရေဆေးပြီး ကြက်သွန်နီကို ခပ်ပါးပါးလေးတွေဖြစ်အောင် လှီးပေးထားပါ။ ကြက်သွန်ဖြူကိုတော့ မညက်တညက်လေး ထောင်းပေးထားပါ။ ဂေါ်ဖီထုပ်၊ ရှောက်ရွက်နဲ့ ငရုတ်သီးစိမ်းတို့ကိုလည်း ရေဆေးပြီး ခပ်ပါးပါးလေးတွေဖြစ်အောင် လှီးပေးထားပါ။ ချင်းကိုလည်း အခွံလေးနွှာပြီး ရေဆေးပြီး မညက်တညက်လေးဖြစ်အောင် ထောင်းပေးထားပါနော်။ ရှောက်သီးကိုလည်း ရေဆေးပြီး အစိပ်လေးတွေ စိပ်ပေးထားပါ။
အားလုံးအသင့်ဖြစ်ရင် ရေစိမ်ထားတဲ့ ကုလားပဲကို ဆယ်ပြီးတော့ အိုးတစ်လုံးထဲထည့်၊ ပြီးရင် နနွင်းမှုန့်လေးထည့်၊ မညက်တညက်ထောင်းတားတဲ့ချင်းနဲ့ ကြက်သွန်ဖြူကိုလည်းထည့်၊ ပါးပါးလှီးထားတဲ့ ကြက်သွန်နီနည်းနည်းကိုလည်းထည့်၊ ဆား၊ အချိုမှုန့်လေးထည့်ပြီး မီးဖိုပေါ်တင်ပြီး ဟင်းရည်အိုး တည်ထားပေးပါ။
ပဲဟင်းအိုးကိုလည်း မဝေအောင် သတိထားပြီး တည်ပေးပါနော်။ ပဲဟင်းအိုးပွက်ပွက်ဆူအောင်တည်ပြီး ဟင်းရည် ကျအောင် တည်ပေးပါ။ ပဲဟင်းအိုးချခါနီးကျရင် အပေါ့အငံလေးမြည်း၊ မာဆလာလေးအုပ်ပြီးတော့ ချလိုက်ပါနော်။ တစ်ဖက်မှာလည်း နှပ်ထားတဲ့ ကြက်ရိုး၊ ကြက်သည်းကြက်မြစ်နဲ့ အူတို့ကို အိုးတစ်လုံးထဲထည့်ပြီး ရေခမ်းပြုတ်ပေးပါနော်။ ကြက်သည်းနဲ့ အူက အနူးလွယ်တာမို့ သူတို့ကို အရင်ဆယ်ပေးပါနော်။ ကျန်တဲ့အရိုးတွေနဲ့ အမြစ်တွေကိုတော့ ရေခမ်းတဲ့အထိ နူးအောင်ပြုတ်ပေးပါ။
ပြုတ်ထားတဲ့ အရေပြား၊ အရိုး၊ အသည်းအမြစ်တို့ကို အအေးခံပြီး အရွယ်တော်လေးတွေဖြစ်အောင် လှီးပြီး ပန်းကန်တစ်ချပ်ထဲထည့်ပါ။ ပြီးရင် လှီးထားတဲ့ ကြက်သွန်နီ၊ ဂေါ်ဖီ၊ ငရုတ်သီးစိမ်း၊ငရုတ်သီးမှုန့်၊ မာဆလာနဲ့ ဆားအနည်းငယ်၊ အချိုမှုန့်တို့ကိုထည့်ပါ။ ပြီးရင် ပဲဟင်းရည်လေးကို ဆမ်းထည့်ပါ။ ရှောက်သီးစိပ်လေးကို ညှစ်ထည့်ပါ။ ပြီးတော့မှ နှံ့အောင် ဇွန်းလေးနဲ့ နယ်ပြီး အပေါ့အငံမြည်းပါ။ အပေါ့အငံစိတ်ကြိုက်ဖြစ်ပြီဆိုရင်တော့ အပေါ်ကနေ ရှောက်ရွက်လေးအုပ်ပြီး သုံးဆောင်နိုင်ပါပြီ။ အစပ်မကြိုက်ရင် ငရုတ်သီးစိမ်းမထည့်ပါနဲ့နော်။ အဲ့ဒါဆိုရင်တော့ ကြက်ရိုးကြက်အရေပြားသုပ် ရပါပြီနော်။
ထွန်း February 3, 2008 at 2:43 PM
ကုလားသုပ်ကိုသတိရသွားပြီ သံပုရာရည် မန်ကျည်းရည်လေးနဲ့ ငြုတ်သီးလေးနဲ့ ရှလွတ်
david santos February 3, 2008 at 8:41 PM
Hello, Lu Lu.
Happy Chenese New Year 2008.
Peace for people of Myanmar.
ကျွန်တော့်ရဲ့ မူကွဲလေးလည်း လာစားပါဦး :)ကျွန်တော်ကတော့ အလွယ်နည်းပေါ့။
Anonymous February 4, 2008 at 9:24 AM
Read More buttom does not work.
I can not read the whole post.
မလေး(မြန်မာ) October 29, 2012 at 9:39 PM
ဒီနေ.ကျားကျားခေါင်းကိုက်နေ လို. ဘာလုပ်ကျွှေးရမလဲ စဉ်းစားနေတာ...ဒါလေးလုပ်ကြည်.လိုက်မယ်..ကျေးကျေး ညလေး